Abakhiqizi nabaphakeli be-china PVC-counter-rotating extruder UA-162473191-1 Imishini Yokuceba
PVC esiphikisayo twin isikulufa extruder UA-162473191-1
I-twin-screw extruder ephikisanayo yathuthukiswa isuka ku-18: 1 wokuqala yaya ku-26 yamanje: 1. Ngenqubekela phambili enkulu yesikulufa sokuklama i-theory kanye nobuchwepheshe bokwenza isikulufa, izidingo eziphakeme zibekiwe ekulawuleni ibhalansi lokushisa komgogodla wesikulufu .
I-twin-screw extruder ephikisanayo yathuthukiswa isuka ku-18: 1 wokuqala yaya ku-26 yamanje: 1. Ngenqubekela phambili enkulu yesikulufa sokuklama i-theory kanye nobuchwepheshe bokwenza isikulufa, izidingo eziphakeme zibekiwe ekulawuleni ibhalansi lokushisa komgogodla wesikulufu . Ukukhuphuka kobude besigaba sokufaka ipulasitiki kanye nesigaba sokulinganisa okulinganayo kuqinisekisa ukukhishwa okuzinzile nokufakwa okugcwele kwempahla futhi kuthuthukisa ikhwalithi yomkhiqizo. Ukuqhamuka kwe-twin flat screw nezindlela zokucubungula izimbobo eziphindwe kabili kuzenzele ngempumelelo ukushiyeka kwamanye ama-extruders amawele amakhulu
i-counter-parallel twin-screw extruder ekhethekile ye-PVC material, ye-PVC powder, i-PVC granules konke kungasebenza.or ngezinto ezixubekile ilungele i-PVC plasticization. yamaphrofayli we-PVC nge-counter parallel twin screw kuyisinqumo esihle kakhulu. sinamakhasimende aphumelelayo esebenzisa lo mshini eYurophu.
Ngokudizayina okuningiliziwe nokunakekela ngobuchwepheshe kanye namabheringi ama-thrust we-long-acting ahlelwe ngokukhethekile kanye nama-gear torque aphezulu, impilo ethembekile ye-extruder iqinisekisiwe. Inhlanganisela yesakhiwo inhlanganisela yenza izidingo zabasebenzisi ezahlukahlukene ze-extruder zaneliswe
Imininingwane ye-extruder efanayo, ingaxhumana nathi info@zjgrcmc.com
Olandelayo: umshini we-agglomerator pelletizing